About camfone – SHWEMall
Home › About camfone
CAMFONE’s Value Propositions
Resonating with the revolutionary changes taking place in the information industry, CAMFONE continuously innovates to meet customer needs and advance our technological leadership. We openly cooperate with industry partners, focus on building future-proof information pipes, and continuously create value for our customers at large.
CAMFONE’s Concept:In user experience oriented, mostly focus on Design, Quality and Service.
Design is the soul ofabrand. CAMFONE always takes the most stylish route, pursues the best design innovation and strives for perfection. CAMFONE aims for high quality products and services, and our customer service reaches amazingly high standards of excellence. We know only too well that design is the soul ofabrand, quality is the life ofabrand and service is the nutrient ofabrand.
CAMFONE’s Strength:Diversified Cooperation Mode, Professional Technical Support, Strict Region Protection
CAMFONE always believes in the principle of win-win cooperations, thus breaking the single cooperation pattern of traditional distribution, and has created various cooperation modes with partners all over the world. We not only take our customer demands into full consideration at all stages of design, development and production, but also pay attention to each detail in the stages of pre-sale, sale and after-sale. Our concerns are our customer’s concerns, and we really put customers at the core of the brand. Furthermore, our professional technical team is ready to provide prompt and efficient technical services to all our global partners at any time. We are well aware of the importance of regional protection, established and implemented intoaseries of strict regional protection policies to ensure the fundamental interests of these regional partners.
Openness, Collaboration and Shared Success
Together with our partners, we are working hard to buildasymbiotic business ecosystem that thrives on shared success. Welcome to join us!
CAMFONE ဆိုသည်မှာ မည်သူနည်း။
CAMFONE ဆိုသည်မှာ ၂၀ဝ၇ ခုနှစ်မှ ကမ္ဘာအနှံ့ ကြားခံနှင့်အမြင့်ဆုံး မိုဘိုင်းဖုန်း ပံ့ပိုးသူ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် SMART PHONES နှင့် Bar Phones ဒီဇိုင်း၊ R and D ထုတ်လုပ်မှု များ၊ ရောင်းချမှုနှင့် စားသုံးသူ ဝန်ဆောင်မှုအပေါ် အာရုံစူးစိုက်ပါသည်။ တာဝန်ရှိသော လုပ်ငန်း၊ ပစ္စည်းတင်သွင်းခြင်းနှင့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု မောင်းနှင်ခံရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အကောင်းဆုံး အရည်အသွေး ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှု ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင် နိုင်သည့် ယှဉ်ပြိုင်မှု အသင်းအဖွဲ့ တည်ထောင်ခဲ့မှု ရှိမည်။ ယခုထိတိုင် CAMFONE ထုတ်လုပ်မှုများ သည် ဘရာဇီး၊ ပီရူး၊ မက္ကဆီကို၊ ကိုလံဘီယာ၊ ချီလီ၊ ပြင်သစ်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဗီယက်နမ်၊ ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီယား၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် လာအိုနိုင်ငံကဲ့သို့သော (၁၀) နိုင်ငံနှင့် ဒေသများထက် ပိုမို၍ အသုံး ပြုသည်။
CAMFONE ၏ တန်ဖိုး အကြံပြုချက်များတော်လှန်သော ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူ ပဲ့တင်ဖြန့်ဝေခြင်းသည် နေရာယူသည်။ CAMFONE သည် စားသုံးသူ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကြိုတင်၍ ကျွနင်္ုပ်တို့၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင်မှု တွေ့ဆုံရန် ဆက်လက်ပစ္စည်း တင်သွင်းသည်။ ကျွနင်္ုပ်တို့သည် စက်မှု PARTNERS အနာဂတ်သက်သေ သတင်းတည်ဆောက်မှုအပေါ် အာရုံစိုက်မှုနှင့်အတူ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ ကျွန်ုပ်၏ စားသုံးသူများ ကြီးမားမှုအတွက် တန်ဖိုးဆက်လက် ဖန်တီးသည်။
CAMFONE ၏ အမြင်သဘောထား
အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံအနေအထားကို တွေ့ရမှု၌ ဒီဇိုင်း၊ အရည်အသွေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှု တွင် အများအားဖြင့် အာရုံစူးစိုက်သည်။ ဒီဇိုင်းသည် အမှတ်တံဆိပ်၏ အရည်အသွေးကောင်းပြည့် စုံသော နမူနာဖြစ်သည်။ CAMFONE သည် အများဆုံး ဖက်ရှင်ကျသော ခရီးလမ်း၊ အကောင်းဆုံး ဒီဇိုင်းပစ္စည်းတင်သွင်းခြင်း ရည်ရွယ်ချက် ပန်းတိုင်ရောက်ရှိအောင် ကြိုးပမ်းမှုနှင့် အပြစ်ကင်းစင် မှုအတွက် ကြိုးစားမှု အမြဲတမ်းရယူသည်။ CAMFONE ရည်ရွယ်ချက် အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်လုပ် မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ စားသုံးသူ ဝန်ဆောင်မှု၊ အလွန်ကောင်းမှုတို့နှင့် အံ့ဩ စုံလင်စွာ အမြင့်တန်း ရောက်ရှိရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုဒီဇိုင်း အမှတ်တံဆိပ် အရည်အသွေး ပြည့်စုံသော နမူနာဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးသည် တံဆိပ်၏ အသက်ဖြစ်၍ ဝန်ဆောင်မှုသည် အမှတ် တံဆိပ်၏ အာဟာရဖြစ်သည်ကို ကောင်းစွာ သိရှိပါသည်။
CAMFONE ၏ ခွန်အား
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနည်းလမ်း၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာထောက်ပံ့မှု၊ စည်းကမ်းကြီးသော ဒေသဆိုင်ရာ ကာကွယ်မှုတစ်ခုမက လုပ်ဆောင်သည်။ CAMFONE သည် အောင်နိုင်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၌ အမြဲတမ်း ယုံကြည်မှုရှိသည်။ ဓလေ့ထ-ုံးတမ်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း၏ ပုံမှန်နည်းလမ်းတစ်ဦးချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ချိုးဖောက်၍ ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ PARTNERS များနှင့်အတူ များစွာသော ပူးပေါင်းမှု နည်းလမ်းများကို ဖန်တီးမှုရှိခဲ့သည်။ကျွန်ုပ်တို့ သည် အားလုံးသော ဒီဇိုင်းအဆင့်များ ကြိုတင်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှု၌ အပြည့်အဝသုံးသပ်ချက် အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ စားသုံးသူ တောင်းဆိုချက်သာ မယူဆောင်နိုင်ပါ။ သို့သော်အကြိုရောင်းချမှု နှင့် ရောင်းချပြီးနောက် အဆင့်တစ်ခုချင်း အသေးစိတ် အာရုံစိုက်လည်း ပေးသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ ပတ်သက်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စားသုံးသများ၏ ပတ်သက်မှုနှင့် အမှတ်တံဆိပ်အဓိကအချက်၌ အမှန် စင်စစ်စားသုံးသူများကို ထည့်သွင်းသည်။ထို့ပြင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အလုပ်အကိုင် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်ဆိုင်ရာ နည်းပညာအသင်းသည် ချက်ခြင်းပြုမူ လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် မည်သည့်အချိန်အခါမဆို အားလုံးသော ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာအနှံ့ PARTNERS များသို့ လုံလောက်သာ နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုများ လုပ်ဆောင်ရန်အဆင့် သင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒေသဆိုင်ရာ ကာကွယ်မှုနှင့် အရေးကြီးမှုဖြင့် တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ သည်။ ဗဟုသုတကောင်းဖြစ်ပြီး ဤဒေသဆိုင်ရာ PARTNERS များ၏ အခြေခံကျသောစိတ်ဝင်စားမှု သေချာရန် တင်းကျပ်သော ဒေသဆိုင်ရာ ကာကွယ်မှု မူဝါများ၏ဆိုးဝါးမှုများ အတွင်းသို့ စိမ့်ဝင် ကူးပြောင်း အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။တံခါးဖွင့်ထားခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အစုရှယ်ယာထည့်ဝင်သည့် အောင်မြင်မှုကျွန်ုပ်တို့၏ PARTNERS နှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့သည် အစုထည့်ဝင်သည့် အောင်မြင်မှုတွင်ချမ်းသာြွကယ်ဝမှုကို နိမ့်ပါးသောလုပ်ငန်း၊ စီးပွားစနစ် တည်ဆောက်ရန် ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။